Excel na Google Earth, site na nhazi UTM - Geofumadas
Febụwarị, 2012 downloads, Apụta, Google Earth / Maps
Ka anyị lee okwu ahụ:
Anọla m n'ọhịa iji wuo ụlọ, dị ka egosiri na tebụl na-esonụ ma chọọ m iji anya nke uche hụ ya na Google Earth, gụnyere foto ole na ole m weere
Ihe ọgụgụ nke template bụ nke otu:
Ndị na-agbanwe Nchịkọta UTMa Geographical in decimal format, n'ihi na ọ bụ ihe Google chọrọ
Na-enye gị ohere ịhazi aha faịlụ na-aga
Kpọrọ aha kml layer
Degharịa faịlụ dị ugbu a, ọ bụrụgodị na emeela ya ugbu a
Ọ na-enye ohere iji mkpado html na nkọwa, dị ka ihe oyiyi, hyperlinks, wdg.
Ihe edere dị njikere maka Spheroid ka a họrọ, anyị maara na maka Google Earth, anyị aghaghị ịhọrọ WGS84.
Na kọlụm mbụ anyị tinye data nke Google ga-egosi dị ka Label.
Na abụọ na-esote nhazi UTM, na-elezi anya na ahazi sistemu anyị ka anyị jiri akara njigide na isi dị ka onyewapụ ntụpọ dị ka puku kwuru puku. Yabụ nhazi dịka 599.157,90 ekwesighi ka ede ya dị ka 599157.90
Na kọlụm na-esote anyị banyere mpaghara ahụ. Naanị itinye ya na akara mbụ, a ga-agbanwe ndị ọzọ. Agbanye na enwere ike gbanwee aka ya ma ọ bụrụ na data dị na njedebe nke mpaghara abụọ. N'otu aka ahụ, ụwa; na nke a, ana m eji data sitere na Bogotá, yabụ ana m eji Mpaghara 18 na Northern Hemisphere.
N'ikpeazụ, nkọwa ahụ, nke bụ ihe anyị ga-ahụ mgbe anyị pịa na isi na Google Earth.
Otu esi ebugo nhazi ndia na Google Maps wee wegha ha na Google Earth
Nzọụkwụ 1. Download data feed template. Jiri ihe atụ anyị gosiri na ihe oyiyi ị nwere ike budata template a.
Nzọụkwụ 2. Bulite template. Site na ịhọrọ template na data ahụ, usoro ahụ ga-eme njikere ma ọ bụrụ na e nwere data nke a na-apụghị ịmepụta; N'ime nkwado ndị a gụnyere:
Ọ bụrụ na ogidi nhazi ahụ adịghị efu
Ọ bụrụ na nhazi ahụ nwere ogwe ndị na-enweghị ọnụọgụ
Ọ bụrụ na mpaghara adịghị n'etiti 1 na 60
Ọ bụrụ na ogige anụ ọhịa dị iche na North ma ọ bụ South.
Nkọwapụta nkọwa na-akwado ọdịnaya html, dị ka nke egosiri na ihe atụ ahụ gụnyere ngosipụta nke ihe oyiyi. Ọ ka ga-akwado ihe ndị dịka njikọ nke ụzọ ntanetị na ntanetị ma ọ bụ diski mpaghara nke kọmputa, vidiyo, ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla bara ụba.
Nzọụkwụ 3. Jiri anya nke uche gị hụ data na tebụl na map.
Ozugbo ebugoro data ahụ, tebụl ga-egosiputa data alphanumeric na map nke ọnọdụ ebe a; Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro nhazi ahụ gụnyere mgbanwe nke nchịkọta ndị a na nhazi ihu ala dị ka Google Maps chọrọ.
Ozugbo a tọhapụrụ akara ngosi ahụ, a ga-elele isi ihe ndị ahụ enyere na Google Street View wee jikọta ya na ya. Site na ịpị na akara ngosi ị pụrụ ịhụ nkọwa.
Nzọụkwụ 4. Gbanwee data ahụ. Site na ndabara ibu data dị na WGS84, dị ka Google jiri. Mana arụmọrụ a na-enye gị ohere ịgbanwe na usoro nhazi ọzọ atọọ ma mee ka maapụ ahụ dị ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, ana m agbanwe Clarke 1866 wee hụ na a tụgharịrị oghere dị na map ahụ.
N'ebe a, ị nwere ike ịhụ template na-arụ ọrụ n'ime vidiyo.
Nzọụkwụ 5. Budata map Kml site na iji ọrụ gTools.
Enter tinye koodu nbudata wee nwee faịlụ ị nwere ike ịlele na Google Earth; Ngwa ahụ na-egosi ebe ị ga-enweta koodu nbudata nke ị nwere ike ibudata ruo oge 400, na-enweghị oke oke ole oghere nwere ike ịbụ na nbudata ọ bụla site na iji gTools API. Naanị maapụ na-egosi nhazi site na Gooogle Earth, yana eserese ụzọ ụzọ atọ arụ ọrụ.
Nhọrọ ọzọ: Gbanwee nhazi na kml faịlụ site na iji Excel macro
Ozugbo ejuputara tabular data, aha nke kml file na adreesị ebe a ga-echekwa ya dikwa n’aka nri. na nke a ọ na-egosi dị ka C: \_ 25 X.kml ọrụ
N'okpuru ala anyị dere aha na oyi akwa ga-enwe na kml, na nke a: Ewelite ọrụ 25 X
Nsonaazụ bụ nke a: site na imetụ otu nkọwa nke kọlụm Excel ikpeazụ nwere ike gosipụta.
N'ikpeazụ, mgbe anyị dị njikere, anyị na-agbanye bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma e kwesịrị imepụta faịlụ ahụ.
Nsonaazụ, mgbe ị mepee ya na Google Earth bụ ihe ndị a. Lee aha nke oyi akwa, ka anyị na-akpọ ya, mgbe ahụkwa enwere isi ihe na nkọwa ya; imetụ ha aka na-ebuli ngosipụta nke nkọwa. Ọ bụrụ na ihe ma ọ bụ ederede Ha dị oke ukwuu, ha nwere ike ịhazi ha na Google Earth site na ịpị aka na oyi akwa na ịhọrọ akụrụngwa.
Esi tinye foto na kml
Nke a dị mfe, were ya na n'ime nkọwa nke ala ụlọ akụ m chọrọ itinye onyinyo nke plateastre plate, mgbe ahụ na cell dakọtara na nkọwa m dere:
Oke njedebe nke ihe onwunwe, ụlọ akụ Cadastre
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na m kpọrọ Photo, Achọrọ m idobe foto nke ụlọ ahụ, usoro ahụ yiri ya.
Ịdọ aka ná ntị:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtinye ahịrị ndị ọzọ, mepụta otu ndị dị ugbu a ka ha wee jiri usoro.
Enweghị mkpa ịgbakwunye ogidi, ọ bụrụ na ịmee, ọ nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ.
Na-achọ ka ị nakwere mkpochapụ macros mgbe ị mepee Excel faịlụ
Ọ bụrụ na ọ zitere gị njehie, ọ nwere ike ịbụ na ndekọ C: enweghị ederede ikike, ịnwere ike ịnwale folda ọzọ dị ka nbudata ndị ọrụ C: \_ dị ka folda ahụ dị.
Site ebe a ị nwere ike ibudata faịlụ kml dị ka ọ kwesịrị.
Nbudata ndebiri na Excel chọrọ onyinye ihe atụ, nke ị nwere ike ime Paypal ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Ọ bụrụ na ihe ị nwere bụ nhazi Geographic nke ụdị Latitude, Longitude, na ịchọrọ iziga na Google Earth, Ụgha bụ nke a.
Previous Post«Previous Mụta AutoCAD Ile Ihe
Next Post AutoCAD N'ezie 3D n'ọnụ ụzọ gị, maka $ 34.99Next »
114 Na-aza "Excel na Google Earth, site na njikwa UTM"
Ọ bụrụ na ị zụtara ndebiri ahụ, dee leta nkwado ahụ metụtara na ozi gị.
Abụkarị nke a bụ akwụkwọ ozi: editọ @ geofumadas. com
Steinar kwuru, sị:
Nweta akara ebe a virker ikke. Hvor kan jeg får tak i den?
Nweta akara aka Ebe a anaghị arụ ọrụ. Ebee ka m ga-enweta ya?
Ike, 2019 na
Ndewo, ị nwere ike ịkekọrịta ngosi ngosi ma ọ bụ nwa oge nwale ngwa "Excel to Google Earth, site na ndị nhazi UTM", naanị maka ebumnuche mmụta na usoro m na-akwalite ngwa gị. Daalụ
Gaa na ntọala mpaghara nke Windows gị ma setịpụ isi dị ka onye na-ewepụta ihe dịka ọnụ ọgụgụ na njedebe dị ka ọtụtụ puku mmadụ.
Ọ bụrụ na ị ka nwere obi abụọ dee na ozi nkwado ahụ weere na ịzụta template ahụ.
Wueber Bogado kwuru, sị:
Ọ na-ewega m na North Pole na ígwé ojii dị Asunción del Paraguay
Ị nwere ike inyere m aka biko?
A kwadoro nsogbu ahụ site na nkwado.
Ọ bụ nsogbu nke ndakọrịta na nsụgharị ọhụrụ 365 na 64 ibe.
Ma ọ bụ nsogbu bụ nhazi mpaghara nke usoro ọrụ gị.
Você deve nkwa na seja vírgula enịm dị ka separator milhar um, um ka vírgula ka separator eo ponto ndepụta dị ka ntụpọ separator um ponto.
Iji nweta nkwado maka ịzụta ihe nlereanya, zipu ozi-e nke nkwado na-esonyere ịzụta.
Ulisses Ribas Junior kwuru, sị:
Soro ntuziaka nke saịtị a, fanye ozi na nloghachi ma ọ bụ njehie »Nrụpụta Ihe Nleba Anya Microsoft na oge igbu« 13 »: Indị Incompatíveis.
Ihe kpatara ị na-eziga data na osisi, bụ n'ihi na windo gị ị ghaghị ime nhazi a:
Isi, dị ka onyewapụ nke puku
Mgbagha ahụ, dị ka onyewapụ nke decimals
Mgbagha ahụ, dịka onye nhazi ndepụta.
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla, anyị zigara gị ozi-e.
ALEJANDRO kwuru, sị:
Ọ na-eme adịghị mma mgbawa, na-eziga gị ka ị gakwuru North osisi, m mere ya ọbụna na data na-abịa dị ka ọ na Excel na ị na-eziga North osisi, o yiri a egwuregwu na cobreis maka ihe na n'elu-adịghị arụ ọrụ, olileanya solucioneis nsogbu.
Ọ bụrụ na anaghị m achọ ka ego m laghachi.
Ị kwadoro ụzọ ụzọ njem?
M na-eme ihe omume ahụ, ana m enweta «Oge njehie ´75´:
A na-ejikọkarị njehie 76 na folda ị na-ekwu okwu ebe a ga-aha faịlụ ahụ.
Ọ dị mma na ị na-eji ụzọ na ndekọ D: ma ọ bụghị C: n'ihi na ọtụtụ oge ịnweghị akwụkwọ ikike ederede na C:
Ọ dịkwa mma iji nyochaa ọnọdụ mpaghara ebe dị iche iche dị ka nkewa nke oke na njiri ka ọtụtụ puku ndị na-ekewapụ.
O doro anya na ị na-agwa m.
Carlos Estopier kwuru, sị:
Ndewo, Ana m eji Excel maka Mac ma nweta nọmba njehie 76
Antônio Felipe Abem Athar nne na nna kwuru, sị:
Na Google Excel dị elu nke Google na Hart na-edozi X yz
nhazi ị nwere ziri ezi.
Ị nwere ya na ọkwa Excel ma ọ bụ nhazi mpaghara nke windo?
Iji kwado nkwado, ị nwere ike ime ya na editọ editọ (na) geofumadas. com
Francesca Mengozzi kwuru, sị:
Daalụ maka iziga m njikọ. Ugbu a, ihe ọ bụla o mere, ọ na-eziga m na North Pole.
M tinyere UTM N mbụ na E mgbe e mesịrị, wee laghachi azụ. Enwere m ọtụtụ puku ndị ọzọ site na njiri na decimals site na isi.
Nhazi sitere na Northern Chile (19 s).
E zigara gị na ụlọ ọrụ nzipu ozi, nsogbu ahụ bụ na ị dere akwụkwọ ozi n'ezoghị ọnụ,
anyị ezigara ya ozi ziri ezi ị dere.
M kwụrụ ụgwọ ahụ ugboro abụọ ma esetụbeghị m template ahụ.
Ị nwere ike ịnweta ya, biko?
Nọmba azụmahịa bụ 5SV58331V3337363F
Hi Carolina, anyị ezigalarị gị njikọ nke email gị. O nwere ike ịbụ na ọ gara na spam gị.
Carolina Trujillo kwuru, sị:
Ndewo, a na m agwa gị na akwụgoro m gị ụgwọ mana ị nyeghị m nhọrọ ibudata. kwuo ugwo site na PayPal rue Carolina Trujillo ma nọmba nnata ya bu 797849290 × 9052642
Gustavo kwuru, sị:
Enwetala m template ahụ na email ahụ, na-akọwa ntakịrị ihe anyị nwere na ya.
Daalụ nke ukwuu na ekele.
A na-ahazi template ahụ maka nso 500 isi.
Extendgbatị ya na isi ihe, ọ dị mkpa ịgbanwe koodu. Ziga ndebiri na editọ @ geofumadas ma anyị ga-agbasa ya.
Anyị na-agbalị iji mụbaa ụdị, ma mgbe ị na-emeghe .kml file na google ụwa, dị nnọọ ahapụ anyị kwekọrọ na mbụ e nyere ahịrị ndị dere data. Olee otú anyị na-akpọ ịbanye olu nke ihe anyị mkpa?, Ka a ịgba nke ihe na ya?
Morningtụtụ ọma Juan Pablo. Anyị abanyela njikọ nke email gị, maka nbudata. Eleghị anya ọ gawara na spam gị.
Tụkwasị na nke a, anyị akwụghachila ụgwọ ugwo abụọ i meworo.
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọzọ, gwa anyị
Ha jiri faili a gbaa m akwụkwọ, akwụrụ m "onyinye ihe atụ" ugboro abụọ ma enwetaghị m ụdị ahụ.
Njehie 75 pụtara na ụzọ ị na-ewere enweghị ikikere ederede, kama ime ya na disk C, nwaa adreesị ọzọ, ma ọ bụ folda ma ọ bụ disk E.
Jean Braga kwuru, sị:
Ọ bụrụ na ị dị oké ọnụ ahịa, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na windo, nsogbu ahụ ka dị.
Erro si uzo uzo / akuko ulo.
Ebe ma ọ bụ akwụkwọ ncheta: c: \_ 25 X.kml ọrụ
Ihe omuma: Nyocha 25 X
Biko nyere m aka idozi nsogbu a.
Ọ dị njọ ịhazi nhazi.
Ma ọ bụ ponto (.) Ea virgula (,) bụ ma ọ bụ dị mma.
Tentei gbanwere na-akpụ akpụ ka mascara do excel, ma ọ bụghị ya.
Kedu otu esi edozi nsogbu a ???
Lee ka o si dị mma
Ụzọ ndị ọzọ ị na-eme faịlụ, dị ka ihe atụ
faịlụ: /// C: /Users/geofumadas/Pictures/005c_got.png
Easyzọ dị mfe iji chọta ụzọ gasị, mepee google chrome, ma site ebe a, ị na-eji «ctrl + o» wee chọọ faịlụ ahụ. Na url ị ga - ahụ ụzọ.
Enwere m ekele nke ukwuu maka enyemaka ahụ, anyị edozilarị ọdịda ahụ, Otú ọ dị, ajụjụ anyị ugbu a bụ otu esi tinye ihe osise na isi ihe dị na mpaghara. Kedu ụzọ anyị kwesịrị isi banye?
Ezi ụtụtụ, Gustavo.
Lelee nke ahụ na nhazi mpaghara nke kọmpụta gị, na nkewa nke puku mmadụ bụ njiri na nhazi nke decimals bụ isi.
Ọ bụrụ na ị ka na-ebute nsogbu, dee na nchịkọta akụkọ, na-ezipụ faịlụ gị na ozi ị banyere.
(nchịkọta akụkọ na geofumadas com)
Emere m ịzụta ụdị tempel Excel ahụ, mgbe ị na-ebulite faịlụ KML, a na-eme ya, mana nhazi na Google Earth adịghị apụta na saịtị gị, ọ na-ewe anyị oge ọ bụla n'otu ebe (North Pole).
Anyị nọ n'ebe ugwu nke Spen na echiche anyị bụ iji template iji chọta isi ihe ndị ahụ na foto ha.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-aga na nchekwa folda ahụ,
Lelee, ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu dee anyị na email na-abịa na azụmahịa.
Ezigbo m, zụrụ m Paypal, ma ana m enwetaghị email na njikọ njikọ. Ogologo oge ole echere?
Anyị ejirila mail zitere gị njikọ ahụ. Agbanyeghị, ị ga-ahụ spam mgbe niile, mgbe ụfọdụ ọ na-aga ebe ahụ.
Cristina kwuru, sị:
Emeela m ugwo site na Paypal, ma enweghi m njikọ ọ bụla iji budata template ahụ. Enyochawo m spam ma ọ pụtaghị. Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji nweta ozi ahụ?
Anyị akwụghachilarị ụgwọ ndebiri nke ị zụrụ ugboro abụọ. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu karịa, mee ka anyị mara.
Anyị ejirila ozi zaghachi gị. Mgbe ụfọdụ ọ na-aga spam, mana anyị edokwara gị njikọ ahụ. Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu, mee ka anyị mara.
CIRILO GIRALDO SALAZAR kwuru, sị:
Na iji mezue ID nke azụmahịa ahụ site PayPal bụ:
Biko, enwere m anya maka nzaghachi ngwa ngwa.
Maka oge a ... daalụ
Lemkwụ ụgwọ Geofumadas.com, akwụwo m ụgwọ site na PayPal ngwaahịa "EXCEL TO GOOGLE EARTH SITE UTM COORDINATES" na n'oge nbudata ihe mmemme ahụ zighaghachite m na PayPal, na nke ahụ mehiere na $ 4.99 USD ka ebubo ụgwọ.
Echeghị m na iji nweta ngwaahịa a bara uru m ga-akwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 10.00 USD.
Gwa m ihe m ga-eme iji budata usoro ihe omume ahụ ma ọ bụ ole ka m ga-echere ma ọ bụrụ na ha zipụrụ m email m; ihe ị ga - eme iji weghachi ụgwọ m kwụrụ ụgwọ n'aha gị.
Lelee spam. Mgbe ụfọdụ ọ na-aga ebe ahụ. Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu, detara email na-egosi na akwụkwọ ọnụahịa ahụ.
Sunday kwuru, sị:
Azụrụ m template ahụ ma esiteghị m na post ahụ, ka m na-eme ya ka ha zitere m otu, M ekele.
Lelee email gị Spam.
Mgbe ụfọdụ ọ na-aga ebe ahụ. Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ọbụla, zaghachi email ahụ egosiri na nkwenye ịkwụ ụgwọ.
Carlos Choir kwuru, sị:
Enweela m ugwo na faịlụ ahụ abịabeghị.
October, 2015 na
Gbanwee ụzọ ebe faịlụ ga-azọpụta.
Ọ dị mma, ọ bụghị na diski C, mana na diski D, ebe ọ bụ na ederedeghị ederede C na-adịghị mgbe ụfọdụ.
Enwere m nsogbu na draịvụ ike nke PC na aghaghị m ịgbanwe ya. Achọrọ m iji ụdị na-agafe UTM na Google Earth ma nye m ozi na-esonụ
Ihe ọjọọ 76 mere na oge ojiri
Enweghị ike ịchọta ụzọ ahụ.
Ọ bụ n’ozi gị. Lelee na mgbe ụfọdụ ọ na-aga spam
Juan Carlos Vega kwuru, sị:
M ugbua ugwo, ebee ka m budata template ????
Emere ndebiri a ka itinye data UTM. Enwere ike ịgbakwunye atụmatụ ịbụ ezigbo ogo ma ọ bụ ogo / nkeji / sekọnd.
Ee, ị nwere ike itinye ihe oyiyi.
Gbanwee ụdị akara ngosi ... ọ bụghị na arụmọrụ nke template dị ugbu a.
Izinghazi ndebiri n'okpuru ọnọdụ ị tụrụ anya… ga-efu US $ 50.
joseluis kwuru, sị:
hi g! Mgbe ụfọdụ ị nyere m aka ịkwado faịlụ m gaa na google ụwa, enwere m mmasị na nke a dị oke mma ma m dị njikere ịkwụ ụgwọ a chọrọ, ma achọrọ m ịkọwa ụfọdụ ajụjụ:
1-Enwere ike igbanwe ya iji ogo, minit na sekọnd ma ọ bụ ogo decimal.
2-Enwere m ike ịgbanwe ụdị akara ngosi site na nhazi.
3-M nwere ike itinye ihe oyiyi na oge ụfọdụ.
Kedu ihe ọ ga-eri ma ọ bụrụ na emere mgbanwe ndị a?
Daalụ maka onyinye gị ,,,,,,
Mee ka peeji ahụ dị ọhụrụ, ị kwesịrị ịhụ njikọ maka nbudata / zụọ
Julian Morales kwuru, sị:
Achọrọ m inweta template a, a na-ere ma ọ bụ ebe m nwere ike inweta ya
ramon kwuru, sị:
ị nwere ike igosi ebee njikọ dị na ibudata, enweghị m ike ịchọta ya na isiokwu ahụ
Jiri njikọ dị na isiokwu ahụ
Ngwa ahụ dị mma. Kedu ka m ga-esi budata ya?
Silvia kwuru, sị:
Kedu ka m ga-esi budata ụdị ahụ iji nwee ike igosi ya?
Hugo Montes de Oca kwuru, sị:
Ezi ngwá ọrụ iji kwado ọrụ nke ọfịs, ekele
Sergio kwuru, sị:
o yiri ka ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị, ọ ga-adị mkpa igosi ya
Rafael kwuru, sị:
ndewo n'abalị ọma nsogbu m bụ na m pụtapụtara mgbe m nyere ya ka ọ mepụta kml "njehie ogbugbu 75" wee mee ihe ha kwuru na m ga-enweta "njehie ngbasa ozi 76" Enwere m ike ịme
Zitere anyị faịlụ ahụ iji nyochaa.
Ka ọ dị ugbu a, ọ rụọ ọrụ nke ọma, ọ nwere ike ịbụ na ụfọdụ ubi ị na-ebute ụzọ ọzọ.
Mikel Belasko kwuru, sị:
Kpamkpam ọ na-atụgharị ha na latitude 32400.000000 na longitude -1.000000 ° Iji otu ndị achikota na igwe mgbakọọ ntụgharị, agbanyeghị, m na-achọpụta na nke mbụ m dị mma, ebe ọ bụ na edeziri m isi okwu ahụ na google ụwa, m na-etinye nhazi nke onye na-agụkọta ihe, ọ we debem nke ọma. Daalụ nke ukwuu
Ihe ọ bụla m na-eme (ahazila m ihe niile ka ọnụnọ a na-aga na oge na puku kwuru puku na commas) na-ewe m oge ịcheta ihe. Ogologo anya m chere na ọ dịịrị m mma, mana latitude bụ 0. Na nkenke, etinyebere m UTM ED50 data nke a abụghị wgs84 nke Northern Spain (Navarra), wee mezie ya n'usoro na Gulf of Guinea.
E jikọtara akaụntụ akwụ ụgwọ m ụgwọ na akaụntụ email ọzọ ma ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị ga-eziga ya na adreesị ozi-e nke m zigara ozi ahụ. Daalụ nke ukwuu
O yikarịrị ka ị na-enwe nsogbu na ọtụtụ puku ihe nnọchianya.
Gbalịa ịbanye na kọntaktị UTM ndị ahụ, na-enweghị oge ma ọ bụ commas iji hụ ma ọ bụ nke a bụ nsogbu ahụ.
Then ga-agbanye na ntọala mpaghara nke igwe gị ma mee mgbanwe ahụ. A choro ka iji komma dị ka puku iche ma kewapụ nkewa; isi ya dị ka ihe ndozi elekere.
M mepụtara faịlụ ahụ ma mgbe ị na-elele ya na ụwa ọ na-eziga m na N. M na-agwa gị: a na-agbanwezi nhazi UTM nke m ji mee ihe site na ndị nhazi na latitude na ịdị ogologo, mana na-eji ihe ndekọ ED50 kama nke WGS84. Ọ kwesịrị na m gafere ha n'usoro UTM nke eji na Excel? Ka o sina dị, echere m na ọbụlagodi na ha ekwekọghị, oghere ahụ agaghị adị oke, n'ihi na ọ bụrụ na atụnyere ụfọdụ ndị na - ahazi ihe ndị m ji ha na ED50 na ha na WGS84 (ha si Spain), mpụ ahụ bụ mita ole na ole, mana na maapụ Echere m na ịnweghị ike ịhụ ihe ọ bụla, ọbụnadị aha mmado na kọlụm "aha". Echiche ọ bụla ebe m mejọrọ? usoro na usoro ntụpọ pụtara ihe ziri ezi (mpaghara ahụ bụ 29 no?).
GLORIA DOMINGUEZ kwuru, sị:
Edere m banyere ịgbanwe site na mpaghara ala gaa na UTM, mana enwere m nsogbu na faịlụ iji mepụta faịlụ ahụ ka ọ gaa Google ma ọ bụrụ na ọ mepụta faịlụ ahụ mana isi ihe niile ka dị na 180grades 0minutes 0.00Seconds North na ya na Latitude 74 ogo 0 nkeji na sekọnd 0.00 West egosipụtaghi isi okwu na maapụ. Enwere m ekele ma ọ bụrụ na ị ga - enyere m aka. Gloria Dominguez
Lelee adreesị email, mgbe ụfọdụ, njikọta template na-aga ebe ahụ
Biko nwaputara m ihe kpatara na enwetaghị m ndebiri ka ọ budata na faịlụ google ụwa, gafere na nhazi ndị ala na UTM mere. Daalụ GEDL
Anyị anwaleghị ya na Mac iOS.
Ekele m maka ịza, emere m ihe a gwara m. Nsogbu a gara n'ihu, agbanyeghị, agbanweeziri m aha e kenyere na faili kml maka mbupụ ma meziwanye ihe ahụ. Site na nkwado nke enyị m gbanwere site na «\_ SIMV \_ MAPAS.000.000.000.kml» gaa «\_ SIMV \_ MAPS \_ test.kml». Ugbu a, ọ naghị ezigara ya na nchekwa enyere maka mbupụ mana n'ikpeazụ, emepụtara faịlụ ahụ, ọ dị na otu folda ebe akwụkwọ mgbasa ozi kachasị.
Enwere m olileanya na ị nwere ike ịchọpụta nsogbu ahụ, arụrụ m ọrụ na windo mana ugbu a, m na arụ ọrụ na Mac ma n'ebe ahụ anyị na-aga, ọ bụrụ na ị nwere aro ọ bụla m ga-enwe mmasị na ya. Daalụ ọzọ
Gbalịa jiri aha na ụzọ dị mfe, dịka ọmụmaatụ:
Jide n'aka na i nwere ikike ide na ndekọ ahụ, na-agbalị ịmepụta faịlụ n'ebe ahụ site na ihe nchọgharị mac.
M na-agbalị iji ya na Mac, ọ na-agwa m mgbe m na-enye ya iji nweta: "Njehie '52' emewo n'oge oge ọsọ ọsọ, aha ma ọ bụ nọmba faịlụ ọjọọ."
Ọ na-enye m nhọrọ anọ, onye mbụ mebiri, enwere m ike ịhọrọ nke ọ bụla n'ime atọ ikpeazụ:
1 Gaa n'ihu 2 Mezue 3.Depuration 4.Help
M na-ahọrọ ịpụ na-ahapụ windo na-ekwu, sị:
'Macro deziri maka Geofumadas
Ọgwụgwụ Ọ bụrụ na
Ị ghaghị ịmegharị ya ka ọ bụrụ nhazi usoro
Ị nwere ike ime nke a na gvSIG ma ọ bụ usoro GIS ọ bụla
antonio becerril kwuru, sị:
Achọrọ m bulite otu onye na-abanye na google ụwa, dị ka m na-eme, ọbịaru bụ ntụgharị nke ụzọ na nhazi ngalaba
Ọ nwere ike ịbụ:
C: / map /
Ihe kachasị dị na ya bụ na site na ihe nchọgharị Internetntanetị, chọọ adreesị iji hụ ụzọ, n'ihi na ọ bụrụ na ịnwere aha nke okporo ụzọ nwere oghere dịka: «akwụkwọ m, ị ga-ederịrị ya dịka o gosipụtara na URL nke ihe nchọgharị ahụ.
Jorge Echeverria kwuru, sị:
Ndewo, ị nwere ike nyere m aka ịnweta "njehie oge 75" na-enye m ihe atụ nke "ụzọ" maka okike nke faili kml site. ọmụmaatụ nke akwụkwọ m ma ọ bụ na nbudata ma ọ bụ na desktọpụ. Daalụ
OZI kwuru, sị:
Daalụ, m nọ na spam.
Lelee SPAM email, mgbe ụfọdụ, sneaks ozi na-abịa na njikọ maka nbudata ozugbo.
Kedu ụzọ ọ bụla anyị si zipụ ya ozugbo na email gị.
Emere m ịkwụ ụgwọ site na paypal mana enweghi ebudata faịlụ ahụ, ma ọ bụrụ na ha chọrọ id. Ana m eziga ya na azụmahịa ahụ.
Nanị ụzọ anyị nwere, na-eji PayPal ma ọ bụ debit / kaadị akwụmụgwọ metụtara PayPal.
JOSE RIVERA CABALLERO kwuru, sị:
Achọrọ m ngwa ngwa ịnweta ngwa Excel na Google Eaarth, ma enwere m kaadị akwụmụgwọ.
Kedu ihe m ga - eme, ma ọ bụrụ na ha nwere kọntaktị ọ bụla na Peru, iji nyefe ego?
Biko, achọrọ m ngwa ahụ na URGENCY.
Zitere m adreesị nke foto ị na-eji iji nwalee ya ma hụ ihe mere.
Mgbe ụfọdụ ọ bụ a ajụjụ na ụzọ na-adịghị mma wuru. Otu ụzọ isi hụ ihe ụzọ ahụ dị bụ imepe faịlụ onyonyo site na ihe nchọgharị ahụ, ịpị aka nri na foto ahụ ma họrọ imeghe ya ... ma họrọ ihe nchọgharị ahụ; ya mere na ị na-ele anya n'okporo ụzọ dị n'elu.
Ericson kwuru, sị:
M gbalịrị ịgbakwunye foto ahụ site na mpaghara okporo ụzọ ma ọ naghị arụ ọrụ, mgbe m tinye okwu ahịrị ka ị na-egosi, a na-agbakwunye foto ahụ iche iche ma ọ bụghị dị ka akụkụ nke isi ihe. Nakwa mgbe m gbalịrị igosipụta foto naanị etiti ahụ apụta ma ọ bụghị foto ahụ.
Lee na taabụ ma ọ bụrụ na ejikọrọ m.
Ọ bụrụ na ịnọghị, ị nwere ike idere m editor@geofumadas.com
anyị mere oge.
Ana kwuru, sị:
Ndezi Ndezi, Achọrọ m ịgwa gị gbasara template nke ị rere m, ị nwere ike ịga m na nkata ahụ?
Ọfọn, n'omume kacha mma bụ imeghe ya na usoro GIS ma bubata ya na kml.
Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe siri ike, zite ya na email m ma gwa gị ma m nwere ike inyere gị aka, n'ihi na enwere m ike ịhụ ụdị mpempe akwụkwọ.
Onye nyocha ahụ aghọtaghị ihe ị na-ekwu
Ebee ka m nwere ike nweta enyemaka nke onwe site na nyocha ... Achọrọ m enyemaka gị ngwa ngwa, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ọ ga-efu gị, daalụ.
mechie ha na nhazi nke oma, ihe ka 600 na enwere m na excel.
Isi nke mmasị: Akpọ ụgbọ mmiri
Nke a bụ ihe m chọrọ ịtụgharị gaa na isi ụdị mbipụta google ụwa, ihe a bụ na enwere ihe karịrị 600 isi nke m chọrọ ịhapụ na usoro kml? Amaghị m ma ọ bụrụ na ị kọwaa ...
Nye anyị ihe atụ nke otu data nke isi dị, na ụdị ọkwa ha dị.
Ndewo ... nwute m kwesịrị ịtụgharị faịlụ zuru oke nke isi ihe na njikwa ha na usoro kml iji hụ ya na ụwa google ... mmadụ nwere ike iduzi m, daalụ.
Ọfọn, obi dị m ụtọ na ọ na-arụ ọrụ.
Achọghachiri m ọzọ na ọ bụ eziokwu, na nhazi mpaghara ka isi ihe ahụ ga-abụ nkewa nke mkpụrụokwu iri, ihe dị iche iche na-ewepụtakwa ọtụtụ puku na njirisi na nkewa nke ndepụta.
Njikere, ekele maka onyinye!
Achọpụtara m na ọ dị mma, ọ na-ezite m otu ahụ na Indonesia.
O doro anya na e nwere esemokwu n'etiti nkeji Excel na nkeji a na-eziga ya.
Ị nwere ike ịhụ nke ahụ na nchịkwa nchịkwa, ntọala mpaghara. Leba anya na isi ihe bu ihe ndi mmadu na-abanye na nke ndi mmadu di iche iche na ndi ozo nke ndi anatara.
M dere ha ka ha na-egosi:
792713.85 na nhazi X
1127836.33 na nhazi Y
E nwekwara windo na-ekwu, sị:
'Error' 13 'mere na oge ịgba ọsọ.
mechie, debug ma ọ bụ nyere aka.
Typesdị ndị ahụ adabaghị »
Ọ bụ usoro ntụpọ.
Ị ga-ede data ahụ n'ụdị:
Gbalịa ya N'ihi na ndebiri bụ ịtụle commas iji ikewapụ puku kwuru puku na ihe dị iche iche iche iche iche ji iche. You ga-eji ya etu ahụ.
Ndị a bụ nhazi m,
na mgbe m na-eme usoro ahụ, zipụ m na Indonesia na ndị nhazi a sitere na Bolivarian Republic of Venezuela, aro ọ bụla?
Yorodis Ramírez kwuru, sị:
A zara ajụjụ m niile !! !!
Elías González kwuru, sị:
Kọwaa njehie ahụ:
Oge mmeghe oge '75':
Ụzọ njehie / nje faịlụ
Ọ bụ n'ihi na amachibidoro m ịkwọ ụgbọala C: ịgbanwe ụzọ ya na-ebute ya n'enweghị nsogbu ọ bụla. M ga-anwa ime nke na-emepụta polygon.
Ị na-abanye ha n'ụzọ ọzọ, hụ na iwu gị bụ North, East (Lat, Long)
mgbe na template ọ dị n'usoro East North (ogologo, Lat).
Ị ga-ewepụ commas, nke mere na ha abanye dị ka ọnụ ọgụgụ.
Enwetara m ule na ọ dabara n'ógbè gị, gbalịa ọzọ ma mee ka m mara.
Echere m na m ga-eme mmelite ka usoro nke nhazi ahụ bụ lat, ogologo oge nke bụkarị ihe eji eme ihe.
N'ebe a, m na-ahapụ ụfọdụ nhazi ndị e weghaara n'ubi na Dominican Republic na ihe ndị na-esonụ:
North ọwụwa anyanwụ
Mgbe m gbalịrị ịkwado ha, ha dara na South America.
Daalụ n'ihu .. !!
M na-atụ aro ka ị nyochaa ihe ndị a:
Cheta na a chụpụrụ orthophotos nke Google Earth, na ọdịiche dị iche iche. Yabụ mgbe ị na-ebido nhazi nke ị maara, ya na ndebiri, chọpụta ihe nhazi Google Earth gosipụtara, ka ị mara ma ọ dabara na ihe mbufere na Dọket WGS84.
Ihe na-adọrọ mmasị iji nweta nkwado bụ ma ọ bụrụ na nhazi nhazi ahụ, ka ọ ghara inwe njehie ngụkọ.
Ọ bụrụ na nhazi ndị a na-ahazi, mana agbanyụrị na foto ahụ, ọ nwere ike bụrụ na njehie ahụ sitere na onyonyo a. N'ụzọ ọ bụla m na-atụ aro ka ha kọọ njehie ha hụrụ, ebe ọ bụ na emepụtara m ndebiri maka iji n'efu mana ọ chọrọ ka ha nye m nzaghachi na nlele.
Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịmepụta polygon ahụ, anyị ga-ahụ n'isiokwu ọzọ.
Iji tinye ụzọ na ndekọ mpaghara, lelee isiokwu a
Iche na faịlụ ahụ nọ n'ọnọdụ C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, mgbe ahụ koodu ahụ ga-abụ:
src = »faịlụ: /// C: /Users/User/Downloads/woopra_ios.png»
Ego ole ka mwepụ na mpaghara 19 gị?
Ọ bụrụ na ị nwere ike idekọrịta m nhazi, iji nyochaa ya.
Ọ na-enye echiche na ị nweghị ikike ide ederede C:
Gbalịa ụzọ n'ime akwụkwọ ọrụ m.
Ị ma na ị na-eji WGS84?
Lelee, Amaghị m ma ọ bụrụ na usoro dị na mba gị nwere ụgha a.
Ego ole ka mwepụ ahụ?
Na-ese anwụrụ, n'ihi na ide banyere ihe ndị a, ị ga - ese ụtaba wii wii ... Hehe.
Marcos Diaz kwuru, sị:
ekele maka onyinye ...
(Ntak emi Geofumadas?)
M na-eme usoro ịkwado foto sitere na ndekọ mpaghara ma enweghị m ike ikwubi ya n'ụzọ dị mma, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịbawanye ọtụtụ esi eme ya n'ụzọ a ebe ọ bụ na ọ rụrụ ọrụ maka m iwepụta foto site na ndekọ weebụ.
M banyekwara na ndị nhazi na mpaghara 19N na akwatago data kpamkpam.
Daalụ otu puku .. !!
Wander Santana kwuru, sị:
Ezi ehihie Gabriel,
Na ndepụta m nke nchịkọta UTM, na mpaghara 19, nke Northern Hemisphere, akpan akpan ke Dominican Republic, ọ na-apụ ma na mpaghara ma na ngalaba. Emeghachiri m usoro ahụ n'oge dị iche iche, data dị iche iche na nsonaazụ ahụ bụ otu. Daalụ maka ọbịbịa maka nchegbu m.
Aga m eche banyere ya, echere m na ọ ga - abụ 2 mbipute nke template a, dịka anyị mere onye na - eziga isi na isi na AutoCAD
Enwere m njehie ahụ:
Ọ bụ n'ihi na anyị ga ebu ụzọ wepụta faịlụ efu?
M ga-agba mbọ ịghọta etu macros si arụ ọrụ, n'ihi na ọ dị m ka ọ bụrụ na site na nke a, ọ ga-adịtụ mfe ịmepụta polygon na oghere ndị abanye. Ezi echiche …